देशले दिएन! | Nagarik News - Nepal Republic Media
१३ आश्विन २०७५ १७ मिनेट पाठ
‘मलाई त अमेरिकाको सरकारले बसभन्दा पनि फर्केर आएँ । तर, खै देशले मेरो कदर गरेको ?’ झर्रो भाषामा भन्नुपर्दा अमेरिकामा केही नाप्न नसकेर स्वदेश आउने हाम्रा दाजुभाइ/दिदीबहिनी खुबै तितो पोख्छन् बेलाबेलामा । अनि उदेक पनि लाग्छ हाम्रो सामाजिक मानसिकता देखेर।
देशको कुनाकन्दरामा बसेर दिनरात नग्रा खियाएर पनि बिहान–बेलुका दुई छाक खान धौ धौ पर्ने जनता चुपचाप आफ्नो कर्ममा लागेकै छन् । न उनलाई कुनै निकायमा गएर आफ्नो वेदना पोख्ने तरिका थाहा छ न त राज्यले यस्तोउस्तो गरेन भनेर आन्दोलन गर्न नै।
एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त महावीर पुनबाटै सुरु गरौं । उनी अहिले आफ्नो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि पैसा जुटाउने अभियानमा अमेरिकातिर छन् । हाल सालैको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, नेपालका बुद्धिजीवी, पत्रकार कसैले पनि आविष्कार केन्द्रको महत्व बुझेन । तथ्य यस्तो छ– सुशील कोइरालाको सरकारले तत्कालीन बजेटमा ५० करोडको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्यो । सो फन्ड सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन निकै समय लाग्यो। पछि पुनले पैसा सोझै आफूलाई दिनुपर्ने र सरकारी नियम लागू नहुनुपर्ने भन्दै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पाँच करोड दिने भनिएको रकम पनि लिएनन् । जनताको कर कुनै व्यक्तिले नियमबिना खर्च गर्न पाउने हुन्छ र ? अनि राज्यले केही गरेन भन्दै उफ्रिने?
राजमार्गका घुम्तीमा राखेका ऐना चोर्ने, फुटाउने, सडकका रेली भाँच्ने विश्वविद्यालयका पुस्तकालय जलाउने, तोड्ने अनि फेरि कुर्लने राज्यले केही गरेन भनेर । हामी जनता पनि सुसंस्कृत र जागरुक हुनैपर्छ।
संविधान दिवसको वरिपरि एक जना विद्वानले भन्दै थिए । संविधानले अधिकार कम दियो, कर्तव्य धेरै । यो सुनेर रुनु कि हास्नु । अधिकारै अधिकारले थिचेर जनतालाई राज्यको आश गर्ने निरीह प्राणी बनाएको छ, यता कसैलाई अझै अधिकार पुगेको छैन । हैन, अब केचाहिँ दिने हो राज्यले जनतालाई अधिकारको नाममा ? ३१ वटा मौलिक अधिकार छन्, संविधानमा खान पाउनेदेखि आवाससम्म । भलै ती सबै अधिकार जनताले तत्कालै नपाउलान् । तर, पनि सुरुवात त भएको छ । आजै काटौं, आजै खाऔं त कहाँ होला र संसारमा?
उता अर्बौ अर्बका योजना ध्वस्त पारेर मस्त खाने कालिका कन्सट्रक्सन र पप्पुलाई उपहारस्वरूप थप अर्बौका प्रोजेक्ट दिन्छ । र, सरकार खोक्छ– भष्ट्राचार निर्मूल पारिन्छ । यातायात मन्त्रीले एकदिन भन्दिए– ५० दिनमा सब खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ । न सडकका खाल्डा पुरिए । न त थानकोटसम्मको बाटो नै बन्यो।
पिचिक्क थुक्यो पिचकारी, "के गर्नु ? सरकारै खत्तम छ"
अफिस मेचमा बसेर, नाकमा औंला कोचेर
झिकेर केही नाकबाट मेचमुनि त्यो पोतेर-
"के गर्नु सरकारै खत्तम छ।"
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७५ ०७:०८ शनिबार
देश सम्मान पुरस्कार